Iimpawu ezilula ezivela kwi-Semalt eziza kwenza iWindowsPress Site yakho ibe yokhuseleko
I-intanethi inikezela ngamathuba amaninzi abantu abaqhuba amaninzii-e-commerce yewebhusayithi ukuqhuba imisebenzi yabo. Ngokomzekelo, amaninzi amashishini asebenzisa indlela ye-e-commerce, enye ezayo kunye nabaninziukuphakanyiswa nokuhla. Ngokomzekelo, iisayithi zixhomekeke kubahlaseli - popular holiday destinations in south america. Hackers zonakalisa ukuphepha kwe-cyber ngeendlela ezininzi, ezenzaukuba bafumane ukungena ngemvume okungagunyazisiyo kwiintlobo zeentengiso ze-e-commerce kunye nokuhamba kunye nedatha yabathengi abachaphazelekayo. Ukuhlala ukhuselekileezi ntshutshiso, kufuneka uqonde indlela abasebenza ngayo.
I-WordPress yinkqubo yolawulo lwezinto eziqhelekileyo. Ngokomzekelo, WordPressezakhe malunga ne-24% yazo zonke i-intanethi kwiwebhusayithi jikelele. Banobu bungqina ngenxa yezinto ezininzi, ezibonakala zithanda imodeli yabo yezoqoqosho.I-WordPress inezixhobo ezininzi kunye neeplagi ezivumela abasebenzisi ukuba bazenzele ii-SEO kunye neendlela zokuthengisa nge-intanethi. Nangona kunjalo, abaninzi abantubenzisa i-WordPress kwiimfuno zabo zewebhu, abahlaseli kunye nezinye izinto ezisongelayo zifumana i-WordPress yegolide yegolide. I-WordPress yaziwa kwaye iyakhawuleza, yintoniyenza i-hicking okanye ezinye iiplagi zayo zilula. I-hacker ingafikelela kwiinkcukacha ezininzi ukusuka nasiphi na indawo ngaphandle kwemvume yomnini.
u-Oliver King, i iSemalt Umphathi Wempumelelo yoMthengi, uvula iingcebiso ezilandelayo ukuphucula ukhuseleko lwe-WordPress xa wenza isayithi:
Ukusebenzisa i-virus ekhuselekile ye-virus iyakwenza ikhompyutha yakho ikhululeke kwiimpompo ezininzi kunye neentsholongwane. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuba isofthiwe kumatshini wakho iiprogram ezifanelekileyo kwaye ziqinisekise ukuba zenza umsebenzi wazo wangempela. Ndiyacelasusa ngokukhawuleza nayiphina inkqubo enobungozi imvelaphi yayo engaziwayo kuwe. Amanyathelo afanayo asebenzayo kwiibrowser. Musa ukuvumela nayiphi naiplagin ukuqhuba kwi-browser yakho. Ziyakwazi ukuqulethe iempendulo, ezenza utshintsho oluhle kwikhompyutheni yakho.
Gwema ugaxekile kunye nobuqhetseba
Musa ukucofa nayiphi na ikhonkco kwi-imeyili yogaxekile. Ezi zixhumanisi zenza esinye somnqamlezo oqhelekileyoukuhlaselwa kwesiza. Zingaba neenkcukacha ezinqamlekileyo, eziseTrojans. Indlela eqhelekileyo yokurhweba abathengisi ngokuqhelekileyo ibeka uludwe kwi-aigama lexwebhu, elinamaTrojans. Njengoko umthengi onolisayo uvula ifayile ukujonga okuphakathi kwayo, ichaza intsholongwane echaphazela yonke intokhomputha. Abantu abaninzi balahlekelwa ulwazi oluxabisekileyo ngale ndlela. Amaphasiwedi ahlaselwayo angaphinda akhiphe amaninzi amaninzi okuthengiswa okunjalonjengokutshatyalaliswa kwemali.
Xa sicwangcisa ezininzi zewebhu, amava omsebenzisi, kwakunye nomgomo wokuphela, ngokuqhelekileyoyethu injongo. Abathungisi abaninzi bewebhu bejolise kwi-SEO kwaye benze umthengi ahambe kwinkqubo yokuthenga ngokulula. Nangona kunjalo, asikwazi ukukwenzaengqondweni. Ngenxa yoko, kukho izihlaselo ezingaphezu kwe-90987 ezihlaselwa nganye kwiminithi kwimida ye-WordPress. Kubalulekile ukubasifunde le nkqubo kunye nokwenza ukuba iiwebhusayithi zethu zikhuseleke kwaye zikhokele ubungqina. Unokwenza ukuba indawo yakho ikhuseleke ngee-hack WordPress elulanjenge-spoofing password kunye nezinye iinzame ze-hack usebenzisa le khokelo. Ukhuseleko lwewebhusayithi yakho kunye neeklayenti zakho zihlalaku tshekisha. Ngaphezu koko, iwebhusayithi ekhuselekileyo yenza kakuhle kwi-SERPs eyenza i-SEO yakho kunye nemigudu yokuthengisa ithwala iziqhamo.